Newcastle oo Guul soo Laabasho leh ka gaartay Arsenal…..+SAWIRRO. – Gool FM
Newcastle oo Guul soo Laabasho leh ka gaartay Arsenal…..+SAWIRRO.
(Premier League ) 15 April 2018.Kooxda Newcastle ayaa dhaafay 40 dhibcood waxeyna xaqiijisteen iney baaqi ku sii ahaan doonaan horyaalka Premier League kadib guul ay si qurux badan kaga gareen Arsenal, taas oo wali guul gaari la’ kulamada Banaanka Sanadkan 2018.
Laacibka Matt Ritchie ayaa daqiiqadii 68-aad guusha siiyay kooxdiisa lagu naaneyso Magpies taas oo hadda badineysa kulankii afaraad oo xiriir ah ciyaaraha horyaalka waxeyna lee yihiin 41 dhibic xili ay shan kulan kaliya ay harsan tahay, sido kalana waxeey 13 dhibcood ka fogaadeen heerka loogu laabto horyaalka Labaad.
Arsenal,oo gaartay wareega afar dhamaadka koobka Europa League kadib wadar goolal oo 6-3 ah ayey kaga soo gudbeen kooxda CSKA Moscow maalintii khamiista , ayaa wali badin kulamada ay marti ahaayeen sanadkan horyaalka Premier league.
Weeraryahanada Pierre-Emerick Aubameyang iyo Alexandre Lacazette, ayaa si wada jira safka kowaad ugu soo bilaawday , waxaana 14 daqiiqo goolka kulanka daah furay Lacazette.
Ayoze Perez ayaa u bar bareeyay goolka kooxdiisa Newcastle ka hor nasiiyada ciyaarta kadib markii uu dhameystiray karoos ka yimid laacibka Andre Yedlin.
Laacibka Calum Chambers ayaa ku dhawaaday mid Arsenal marka kale hogaanka u dhiibi karay dhamaadka qeybta hore kadib markii uu la kulmay kubad uu soo madaxeeyay Mustafi.
Waxeey ciyaarta bar baro ahaato qeybta dambe kooxda Newcastle ayaa is badal samesay waxeyna la yimaadeen goolka labaad daqiiqadii 68-aad waxaana dhaliyay ciyaariyahanka Ritchie, waana goolka ay kooxdiisa guusha ku gaartay.